क्रिकेट Archives | Page 415 of 492 | TajaKhabarTV
नेपालले टस जितेर बलिङ रोज्यो, हेर्नुस् लाईभ फोटोहरु ( फोटो फिचर )
२०७४, २ फाल्गुन बुधबार १३:०० February 14, 2018 ताजा खबरक्रिकेट
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल ९आईसीसी० विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन–२ अन्तर्गत समुह चरणको अन्तिम खेल आज क्यानडासँग खेल्दै छ । विश्वकप छनोट खेल खेल्नका लागि नेपाललाई जित्नैपर्ने दबाव छ । खेलमा नेपालले टस जितेर पहिले फिल्डिङ रोजेको छ। क्यानडालाई पराजित…
नेपालले टस जितेर फिल्डिङ रोज्यो , सहि निर्णय ?
२०७४, २ फाल्गुन बुधबार १२:५३ February 14, 2018 ताजा खबरFeatured, क्रिकेट
काठमाडौं । अाईसिसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन टुको महत्त्वपूर्ण खेलमा अहिले नेपालले क्यानडा सँग खेल्दैछ । खेलमा नेपालले टस जितेर पहिले फिल्डिङ रोजेको छ। जारी प्रतियोगितामा नेपाल र क्यानडाले समान तीन जित र एक हारको नतिजा आत्मसाथ गरेका छन् ।…
नेपाल र क्यानडा बिचको खेल कति बजे ? कसरी हेर्ने लाईभ ? सम्पुर्ण जानकारी
२०७४, २ फाल्गुन बुधबार १०:३१ February 14, 2018 ताजा खबरक्रिकेट
काठमाडौं । नामिबियामा जारी आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन टु अन्तर्गत लिग चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले आज (बुधबार) क्यानडासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । नेपाल र क्यानडाबीचको खेल नेपाली समय अनुसार सवा १ बजे सुरु हुनेछ । यो खेलको कुनै पनि टेलिभिजनबाट…
नेपाल र क्यानडा बिचको भिडन्तमा कसले कति खेल जिते ? जानीराखौ
२०७४, २ फाल्गुन बुधबार १०:२२ February 14, 2018 ताजा खबरFeatured, क्रिकेट
काठमाडौं, फागुन २ :आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन टू अन्तर्गत नेपालले अाज लिगको शीर्ष स्थानमा रहेको क्यानडासँग खेल्दैछ । नामिबियाको विन्डहकस्थित वन्डरर्स क्रिकेट मैदानमा हुने खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो सवा एक बजेबाट सुरु हुनेछ । जारी प्रतियोगितामा नेपाल र क्यानडाले…
अाज क्यानडालाई जित्नै पर्ने दवाबमा नेपाल, हारे के हुन्छ ? जानीराखौ
२०७४, २ फाल्गुन बुधबार १०:१४ February 14, 2018 ताजा खबरक्रिकेट
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल ९आईसीसी० विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन–२ अन्तर्गत समुह चरणको अन्तिम खेल आज क्यानडासँग खेल्दै छ । विश्वकप छनोट खेल खेल्नका लागि नेपाललाई जित्नैपर्ने दबाव छ । खेल नेपाली समयअनुसार सवा १ बजे हुनेछ । यो पनि…
पाँचौ वनडेमा दक्षिणलाई पराजित गर्दै भारतले बनायो यस्तो रेकर्ड
२०७४, २ फाल्गुन बुधबार १०:०९ February 14, 2018 ताजा खबरक्रिकेट
जोहान्सवर्ग, फागुन २ : भारतले दक्षिण अफ्रिकासँगको एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला जितेको छ। ६ एक दिवसीय श्रृङ्खला अन्तर्गत मंगलबार भएको पाँचौँ खेलमादक्षिण अफ्रिकालाई ७३ रनले हराउँदै भारतले श्रृङ्खलामाथि कब्जा गरेको हो। यो पनि हेर्नुस् : बर्षको सर्वाधिक अाकर्षक १० पुरुषमा क्रिकेटर…
भारत र दक्षिण अफ्रिका बिचको खेलमा देखियो तीन करोड नेपाली खुसि हुने यस्तो तस्बिर
२०७४, १ फाल्गुन मंगलवार २२:३९ February 13, 2018 ताजा खबरक्रिकेट
काठमाडौं । दक्षिण अफ्रिका र भारत बिच अहिले पाँचौ वनडे भईरहेको छ । खेलमा भारतले दिएको २७५ रनको लक्ष्य पछ्याउँदै अहिले दक्षिण अफ्रिकाले ब्याटिङ गरिरहेको छ । यो खबर तयार गर्दासम्म दक्षिण अफ्रिकाले २३ अोभरमा ३ विकेट गुमाएर ११० रन…
दक्षिण अफ्रिकाको शानदार सुरुवात, भारतलाई हारको खतरा
२०७४, १ फाल्गुन मंगलवार २१:४७ February 13, 2018 ताजा खबरक्रिकेट
काठमाडौं । पाँचौ वनेडमा भारतले दिएको २७५ रनको लक्ष्य पछ्याउँदै ब्याटिङ सुरु गरेको दक्षिण अफ्रिकाले शानदार सुरुवात गरेको छ । अोपनर एडिन मार्करम र हसिम अमलले पहिलो विकेटको लागि ५२ रनको साझेदारी गरेका थिए । कप्तान मार्करम ३२ र जेपि ड्युमिनी…
रोहितको शतकमा भारतले बनायो २७४ रन , जित कस्को ? ( फोटो फिचर )
२०७४, १ फाल्गुन मंगलवार २०:३२ February 13, 2018 ताजा खबरक्रिकेट
काठमाडौं । भारत र दक्षिण अफ्रिका बिचको पाँचौ बनडेमा भारतले पहिले ब्याटिङ गर्दै निर्धारण ५० अोभरमा ७ विकेट गुमाएर २७४ रन बनाएको छ । भारतको लागि अोपनर रोहित शर्माले ११५ रनको इनिङ खेले । अन्य भारतिय खेलाडीमा कप्तान बिराट कोहलीले…
यसकारण क्यानडा बिरुद्ध नेपाल गर कि मरको स्थितिमा
२०७४, १ फाल्गुन मंगलवार २०:०६ February 13, 2018 ताजा खबरFeatured, क्रिकेट
काठमाडौं, फागुन १ । नामिबियामा जारी आइसीसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन–२ को लिग चरणको अन्तिम खेलमा बुधबार नेपालले क्यानडासँग खेल्दैछ । ६ टोली सहभागी प्रतियोगिताको शीर्ष दुईमा रहने टिमले अर्को महिना जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप छनोटमा खेल्न पाउने भएकाले यो खेलमा…
Previous 1 … 414 415 416 … 492 Next